DELL INSPIRON 15 NA-AKWỌ ỤGBỌALA ỌKWỌ ỤGBỌALA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ na foto, ọnọdụ nwere ike ịmalite nke chọrọ mgbanwe n'ọdịdị ntutu mbụ. Enwere ike ime nke a site n'enyemaka nke ndị editọ foto foto zuru oke na ọrụ pụrụ iche n'ịntanetị.
Gbanwee agba ntutu na foto online
Iji gbanwee agba ntutu, ị nwere ike ịme onye nyocha foto ọ bụla na weebụ, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na atụmatụ agba. Otú ọ dị, anyị ga-atụle usoro a naanị na ọrụ weebụ ndị kachasị mfe iji.
Usoro 1: Avatan
Ọrụ ịntanetị nke Avatan taa bụ otu n'ime ndị editọ foto kachasị mma dị site na ihe nchọgharị ma ọ bụghị ịchọrọ ndebanye aha. Nke a bụ n'ihi ọnụnọ nke ọtụtụ ngwaọrụ, gụnyere ikwe ka ị gbanwee agba ntutu ọsọ ọsọ.
Mgbe ị meghere isi akwụkwọ nke ọrụ ahụ, kpoo òké n'elu bọtịnụ ahụ "Dezie" ma họrọ usoro ọ bụla ị ga-eji bulite foto.
N'oge a, ịnwere ike iji aka rụọ ọrụ Flash Player.
N'elu ngwá ọrụ kachasị n'elu n'elukspace, họrọ "Iweghachi".
Site na ndepụta nke ngalaba, gbasaa oghere ahụ "Ezumike".
Ugbu a, pịa bọtịnụ caption "Agba agba".
Gbanwee agba chara acha ma jiri akara ngosi. Ịnwekwara ike iji ndebanye ndebanye ọrụ n'ịntanetị.
I nwere ike igbanwe uzo nke brush jiri ozo Nzuzo Izu.
Ogologo nghọta doro anya kpebisiri ike site na ụkpụrụ dị na ngọngọ ahụ. "Mmetụta".
Enwere ike gbanwee ìhè site na iji oke "Ọpụpụ".
Mgbe ịmechara ọnọdụ ahụ, na nchịkwa ọrụ na arụ ọrụ, rụọ agba agba.
Ịnwere ike iji ogwe ngwaọrụ ịmegharị gburugburu oyiyi, gbanye ya ma ọ bụ kagbuo ya.
Mgbe ị na-ahọrọ ndo na palette, a ga-emecha ntutu ị họọrọ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, pịa akara ngosi ahụ na onyinyo nke nhicha ma gbanwee ọrụ ya site na iji ihe mmịfe ahụ Nzuzo Izu. Mgbe ị na-ahọrọ ngwá ọrụ a, ị nwere ike ihichapụ mpaghara ndị ama akara akara, na-alọghachi gamma mbụ nke foto ahụ.
Mgbe arụpụtara ikpeazụ, pịa "Tinye" iji zọpụta ya.
Mgbe ịmechara nhazi nke ntutu isi na foto ahụ, a ga-echekwa faịlụ agwụla na kọmputa ma ọ bụ bulite ya na otu n'ime netwọk mmekọrịta.
Pịa bọtịnụ ahụ "Chekwa" na ngwaọrụ kachasị elu.
Dejupụta n'ọhịa "Filename" ma họrọ usoro kachasị mma site na listi.
Debe uru "Àgwà oyiyi" ma jiri bọtịnụ "Chekwa".
Ị nwere ike ijide n'aka na agba ntutu gbanwere nke ọma site na imepe foto ahụ mgbe nbudata. N'otu oge ahụ, àgwà ya ga-abụ ọkwa dị mma.
Ọ bụrụ na ọrụ ịntanetị adịghị eme ihe ndị ị chọrọ, ị nwere ike ịgakwuru onye ọzọ, ihe a na-elekwasị anya.
Usoro 2: MATRIX Ụdị Agba
Ọrụ a abughi onye nchịkọta foto ma nzube ya bụ ịhọrọ ụzọ edozi. Ma, ọbụlagodi na ị tụlere atụmatụ a, ọ ga-ekwe omume iji ya gbanwee agba aja, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale otu ma ọ bụ ọzọ.
Rịba ama: Ọrụ ahụ chọrọ nsụgharị nchọgharị ọhụrụ ya na Flash Player emelitere.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti website MATRIX agba
Mepee saịtị saịtị na njikọ nke enyere, pịa "Bulite foto" ma họrọ foto a ga-edozi ya, o kwesịrị ịdị elu.
Iji ngwaọrụ "Họrọ" ma "Hichapụ" họrọ ebe na-agụnye ntutu na mbiet ahụ.
Iji nọgide na-edezi, pịa "Na-esote".
Họrọ otu n'ime ụdị agba agba agba a tụrụ aro.
Iji gbanwee agba, jiri nhọrọ dị na kọlụm "Họrọ ụcha". Biko mara na enweghi ike ijikọta agba niile na foto mbụ.
Ugbu a na ngọngọ "Họrọ mmetụta" Pịa otu n'ime ụdị.
N'iji ọnụ ọgụgụ dị na ngalaba "Agba" Ị nwere ike ịgbanwe ọkwa ntaneti agba.
Ọ bụrụ na ị họrọ nmetụta nke igosipụta ntutu isi, ị ga-ekwesịrị ịkọwa agba ndị ọzọ na agba agba.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịgbanwe mpaghara agbacharịrị nke agba na foto ma ọ bụ gbakwunye foto ọhụrụ.
Tụkwasị na nke a, enwere ike ibudata foto ahụ gbanwere na kọmputa gị ma ọ bụ netwọk mmekọrịta site na ịpị otu n'ime akara ngosi kwekọrọ.
Ọrụ ntanetị a na-arụ ọrụ na ọnọdụ akpaka, na-achọ ka ị rụọ ọrụ kacha nta. N'ihe banyere enweghị ngwá ọrụ, ị nwere ike ịbịa Adobe Photoshop ma ọ bụ ihe nchịkọta foto ọ bụla ọzọ.
Gụkwuo: Mmemme maka ịhọrọ ụcha isi
N'ihe banyere ọrụ ọ bụla a na-ahụ maka ịntanetị, isi ihe na-adịghị mma ma n'otu oge ahụ bụ ihe dị mma bụ àgwà foto ahụ. Ọ bụrụ na foto ahụ zutere ihe ndị anyị kwuru na mbụ na isiokwu ahụ, ị ​​nwere ike nsị ntutu isi gị.